एक्सफोलिएसन - तपाईको कपाल छिटो बढ्नको लागि कुञ्जी | बेजिया
सुसाना Godoy | 07/04/2021 12:00 | सुन्दरता
यो पहिलो पटक होइन कि हामी हेर्न चाहन्छौं कसरी हाम्रो कपाल छिटो बढ्छ। ठिक छ, निश्चित रूपमा तपाई पहिले नै यसको लागि सबै प्रकारका समाधानहरू खोज्न थोरै थाक्नुभएको छ। आज हामी सबैभन्दा सामान्य मध्ये एक देख्नेछौं जुन हाम्रो औंलाको छेउमा छ तर हामी सायद यसलाई सधैं महत्त्व दिदैनौं जुन यसले वास्तवमै लिन्छ: एक्सफोलिएसन.
किनकि जसरी शरीरको बाँकी भागहरूमा हुन्छ, एक्सफोलिएसन एक प्रक्रिया हो जुन हाम्रो छालामा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ। यो त्यस कारणले हो यदि हामी कपालको बारेमा सोच्छौं भने, वा यसको सट्टामा, पछाडि छोड्ने छैन। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कुन चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्छ?
1 किन एक्सफोलिएसन छिटो कपालको विकासको कुञ्जी हो?
2 कफीको साथसाथै टाउकोको छाला निकाल्नुहोस्
3 तपाईको कपालका लागि चिनी र जैतूनको तेल
4 चिनी र कागती
किन एक्सफोलिएसन छिटो कपालको विकासको कुञ्जी हो?
हामी सबैलाई थाहा छ, एक्सफोलिएट भनेको मृत कोषहरूलाई बिदाइ हो। तसर्थ, जब हामी यसलाई छालामा गर्छौं, हामी सबै बढि हटाउनेछौं, सुधारको लागि ठाउँ बनाउन। यस मामलामा, त्यस्तै केही हुन्छ किनकि हामी के गर्न जाँदैछौं जुन हाम्रो स्केलपलाई एक्सफोलिएट गर्दछ, जुन सँधै यसको आवश्यकता हुन्छ। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ धेरै जसो अवस्थामा फ्याट सulate्कलन हुन्छ, जबकि अन्यमा यो सुख्खापन हुन्छ। राम्रो एक्सफोलिएसनको साथ हामी यस क्षेत्रमा छालालाई मद्दत गर्नेछौं, केहि उत्पादको अवशेषहरूलाई बिदाइ दिन जुन कहिले कपालमा रहन्छ र उत्तेजक रक्तस्राव हुन्छ ताकि कपाल पहिलेभन्दा झन्‌ बलियो हुन थाल्छ। हामीले प्रस्ताव गरेका केही प्राकृतिक उपचारहरू लागू गर्नका लागि तपाईं यी सबै धन्यवाद देख्न सक्नुहुनेछ।
कफीको साथसाथै टाउकोको छाला निकाल्नुहोस्
कफी पाउडर हामी एक्लोफोलिएट गर्न चाहान्छौं भने प्रयोग गरिने औषधीहरू मध्ये एक हो। थप रूपमा, यो एक घटक हो जुन हामी सबैको घरमा निश्चित रूपमा छ। त्यसो भए, हामीलाई हाम्रो मिश्रण तयार गर्न सुरु गर्न table टेबल स्पून कफी चाहिन्छ। तर त्यसोभए यो मसाज बढी पूर्ण हुन सक्छ र यो हाम्रो लागि सजिलो छ, जस्तो कि केहि छैन दुई चम्चा प्राकृतिक दहीको साथ कफि मिक्स गर्नुहोस् वा यदि तपाईंसँग छैन भने, एक सानो नरिवल तेल। ताकि यो मद्दत प्रदर्शन गर्दा हामीलाई अधिक मद्दत गर्दछ। यो धेरै औंला नलागी र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राम्रोसँग कभर नगरी औंलाको टुप्पोसँगै हुनेछ।
तपाईको कपालका लागि चिनी र जैतूनको तेल
एक्सफोलिएसन गर्न अर्को विकल्प भनेको चिनीको साथ सहयोग गर्नु हो। तपाईंको ग्रेनाइट्स हामीलाई विचार गर्न को लागी एक महान परिणाम छोड्नेछ। तर यो सत्य हो कि हामीले यसलाई सँधै केहि अरूसँग मिलाउनुपर्दछ, ताकि यो छालामा राम्रोसँग ग्लाइड भयो। यस अवस्थामा, यो जैतुनको तेल हुनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ, यो हाइड्रेशन प्रदान गर्न जिम्मेवार छ, साथै सबै प्रकारका फोहोरहरू हटाउने र हामीलाई एन्टिअक्सिडन्टहरू दिनको लागि। यो विचारहरु को एक अर्को हो जुन हामी ल्याउन सरल हुन को लागी र यसको महान परिणामहरु को लागी।
चिनी र कागती
यो उपचार तौलको छाला भएका व्यक्तिहरूको लागि उपयुक्त छ। किनकि हामीलाई थाहा छ कागती नियन्त्रण गर्ने जिम्मा लिम्बूको हुनेछ। त्यसो भए, चिनी आउँनेछ, जुन हामीसँग भएका सबै फोहोरलाई तानेर फर्काइनेछ। यो जस्तो उपचारको लागि, केहि पनि छैन जस्तो एक घटक र अर्कोको समान मात्राको छ। यो पनि याद गर्नुहोस्, तपाईको कपालमा रहेको निम्बू, यदि तपाईंले घाम पाउनुभयो भने, यसलाई हल्का बनाउन सक्छ। त्यसोभए, यी प्रकारका विचारहरू सँधै उत्तम रूपमा रातमा गरिन्छ जब हामी बाहिर जाँदैनौं। तपाईंको कपाल केहि नम हुनुपर्छ जब तपाईं यसलाई लागू गर्न जानुहुन्छ। यहाँबाट, तपाईं एक गोलाकार तरिकामा मालिशको साथ शुरू गर्नुहुनेछ र केही मिनेट पछि, तपाईं सामान्य रूपमा तपाईंको कपाल धोउन सक्नुहुन्छ। तपाईं पक्कै यसको प्रभाव चाँडै देख्नुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » तपाईको कपाल छिटो बढ्नको लागि एक्स्फोलियसन साँचो हो
फ्रान्सका towns शहरहरू जहाँ तपाईं बस्न चाहानुहुन्छ